Palantir သည် IBM နှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည် - Communal News: Online Business, Wholesale & B2B Marketplace News
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 Doris Mkwaya B2B, စီးပွားရေး, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, သတင်းဆောင်းပါး, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, လက်ကား, လက်ကား & B2B စျေးကွက်
"ဒါကကျွန်တော်တို့ကြေငြာခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံး [မိတ်ဖက်ပြုမှု] ပါ။ နောက်ထပ်မျှော်လင့်ပါတယ်" ဟု Sankar ကပြောကြားခဲ့သည်။
အကျော်ကြားဆုံးသောနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ Palantir Technologies ၏ဒေတာစင်တာသဘောတရားဖြစ်သည်။
Palantir Technologies သည် cloud computing နှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများအထူးပြုသည်။
Palantir Technologies သည်ကြီးမားသောဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းကိုအထူးပြုသည့်အများပိုင်အမေရိကန်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်လိုရာဒို၊ ဒင်းဗားတွင်ရုံးချုပ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen နှင့် Alex Karp တို့ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Palantir ပိုမိုမြင့်မားဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တနင်္လာနေ့ပိုမိုမြင့်မားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ စတော့ရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၃၇.၅၈ မှ ၁၀% ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
Shyam Sankar, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ် Palantir Technologies က, IBM နှင့်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနယ်ပယ်သည်နည်းပညာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသည် Palantir Technologies ၏ရောင်းအားတိုးမြှင့်ရေးအတွက်ရေရှည်ကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။
"ဒါကကျွန်တော်တို့ကြေငြာခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံး [ပူးပေါင်းမှု] ပါ။ နောက်ထပ်မျှော်လင့်ပါတယ်" Sankar ကပြောသည်.
လူကြိုက်အများဆုံးကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခုမှာ Palantir Technologies ၏ဒေတာစင်တာ၏အယူအဆဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်များစွာမှီခိုအားထားခဲ့သည်။
Palantir Technologies ကတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့်အခြားနည်းပညာများသည်ပိုမိုတိကျသောပရိသတ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ဤနည်းပညာ၏ဥပမာတစ်ခုမှာသူတို့၏ Palantir Wearable solution ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့၏အိုင်ဒီအမှတ်အသားများကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများကတံဆိပ်အမှတ်အသားကိုင်ဆောင်စရာမလိုဘဲမှတ်ပုံတင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Palantir Technologies ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာကိုလူကြိုက်များသောနောက်တစ်ခုဖြစ်သည် cloud computing.
၀ တ်ဆင်သူအချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမီရန် Palantir Wearable ဖြေရှင်းချက်သည် Cloud ကိုထပ်မံအသုံးပြုသည်။ ဤအချက်အလက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ယူအက်စ်စစ်တပ်ကဲ့သို့အသုံးပြုသူများအတွက်အကျိုးရှိသည်။
အချက်အလက်များသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်စစ်သားများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အားလုံး၏လက်ရှိမြေပုံများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်လှမ်းမီမှုအပြင်၎င်းတို့၏မြေပုံများကိုလက်ပ်တော့များပေါ်တွင်ကြည့်ရှု။ တင်ပို့နိုင်ခြင်းတို့လိုအပ်သည်။
International Business Machines ကော်ပိုရေးရှင်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောနယူးယောက်၊ Armonk တွင်အခြေစိုက်သောအမေရိကန်နိုင်ငံစုံနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Palantir Wearable ၏စိတ်ကူးသည်အနည်းငယ်သောသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်အလားထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤလျှောက်လွှာသည်စစ်တပ်နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး ၀ န်ထမ်းများအပြည့်အဝနားလည်ထားသောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာရယူနိုင်ရန်စွမ်းရည်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာနှင့်နည်းပညာသည်၎င်းတို့၏ဖုန်းများပေါ်တွင်သိမ်းထားသောရုပ်ပုံများနှင့်အခြားဒေတာများကိုကြည့်ရှု။ ကြည့်ရှုလိုသူစားသုံးသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်သည်။ စားသုံးသူများကဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် Cloud ကိုအသုံးမပြုခင်၎င်းတို့အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးရမည်။
လူတစ် ဦး သည် Palantir Wearables သည်လူများအားမည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုမသိနိုင်မီ Cloud Computing မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ Cloud Computing သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲသွားသည်မှာအံ့ is စရာကောင်းပြီးစားသုံးသူများအတွက်အကျိုးရှိရန်၎င်းအတွေးအခေါ်ပင်ဖြစ်သည်။
Cloud Computing သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမည်သည့်ကွန်ပျူတာမှမဆိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုသုံးစွဲသူများကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုဆာဗာကွန်ယက်တစ်ခု၏အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲသီးခြားနေရာတွင်ထားရှိသည်။
မိုဃ်းတိမ်ကို အများပိုင်သတင်း IBM က Palantir Technologies က ဝတ်စရာ
မြန်မာ - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကအကျဉ်းသားများကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်